Suuqleyda: Aqoonsiga Dabeecadahaas oo udub dhexaad u ah Iibsashada Ingiriiska | Martech Zone
Ma aragtay wixii aan halkaas ku qabtay? Midwester-kani wuxuu adeegsaday higgaadinta Ingiriiska ee dabeecad halkii laga dhaqmi lahaa. Waxaan kaliya rabay inaan cadeeyo qof walba sida aan aduunyo u ahay ama u ahay. Xaqiiqdii weligay maan tagin Boqortooyada Ingiriiska inkasta oo iskotishka iyo Ingiriiska ay ka dhaxlaan hooyaday dhinaca qoyska. (Fiiri taas? Mar kale ayaan sameeyay!)
Waayahay, kaftan iska dhaaf (doh!), Tani waa macluumaad aad u wanaagsan oo ay qabteen Nooca CM. Runtii waxaan aaminsanahay inay tani u badan tahay sawir sax ah oo ku saabsan hab dhaqanka wax iibsiga magaalooyinka ee halkan Maraykanka sidoo kale.
Fahmitaanka habdhaqanka macaamilku maahan oo keliya in la ogaado waxyaabaha soo saara ama hadiyado xayeysiin ah racfaan ka qaadashada dadka. Marka laga eego aragtida suuqleyda, waa inay ahaataa in loo dhaadhaco waxyaabaha gaarka ah sida sababta uu macaamilku ugu dhaqmo hab gaar ah a dukaanka hadiyadaha gaarka ah, sida dadku u wadaagaan macluumaadka midba midka kale, iyo waxa saameyn ku leh dhaqanka ama bulshada ee ka shaqeynaya qaabeynta fikradahooda. Max Baumber
Halkan waxaa ku yaal dabeecado soo noqnoqonaya oo maskaxda lagu hayo maaddaama aad horumarinaysid xeeladaha suuqgeyntaada dibadda (iyo xitaa halkan):
Dukaameystayaasha UK waa Daacad - qabashada xogtooda, la xiriir, oo la shaqsiyeeyo dadaalka suuq geynta.
Dukaanleyda Boqortooyada Midowday ayaa qiimeeya Bilaash, Gaarsiin lagu kalsoonaan karo iyo Soo Celinta Alaabada - xalliso arrimaha gaarsiinta iyo bixinta soo celin bilaash ah si aad ugu dhex barato tafaariiqda internetka
Alaabada wax iibsata ee Boqortooyada Midowday ee internetka - hubi in macaamiisha ay ka heli karaan macluumaadka ku saabsan badeecadaada khadka tooska ah iyada oo loo marayo raadinta, bulshada, iyo barta wax soo saarka xoogga saareysa.
Dukaammada Weli Waxay Muhiim U Yihiin Safarka Iibsashada Brit - Isku dar dukaamadaada internetka iyo khadadka si aad u hesho waayo-aragnimo wax iibsi oo aan kala go 'lahayn oo abaalmarin ku soo iibso dukaanka iyo daacadnimada.
Aqoonta Waxsoosaarka Shirkadaha Iibinta iyo Awoodda Arag Waxsoosaarka Waa Muhiim - U siiso macaamiil khibrad fudud dukaanka adoo maalgashanaya tababarka iyo horumarinta wakiilada iibka dukaanka.
Millennial Brits waxay raadinayaan xaqiijinta shabakadaha bulshada - Kordhi joogitaanka sumaddaada warbaahinta bulshada.
Dukaamaysiga Moobilku Waa u Qiimeeyaa Kooxaha Macaamiisha Yaryar - In la hagaajiyo qibradaada mobilka ee shabakadaada si aad u kordhiso sicirka ku bedelka macaamiisha yar yar
Waa tan faahfaahinta cajiibka ah, Caadooyinka Iibsashada Brits iyo Dabeecadaha Waxay u Baahan Yihiin Inay Ogaadaan.
Tags: BritishIngiriiskadhaqanka iibsigadabeecadaha iibsashadadukaamanka dhexdiisadhaqanka iibsiga kun jirkadhaqanka iibsiga mobiladaiibinta ansaxintadhaqanka dukaamada tafaariiqdashoppingansaxinta warbaahinta bulshadaukuk wax iibsadauk daacadnimo dukaameysiBoqortooyada Ingiriiska